Rastrabani.com | अब कहिले बन्छ प्रदेश सरकार ? यस्तो छ प्रक्रिया हेर्नुहाेस् - Rastrabani.com अब कहिले बन्छ प्रदेश सरकार ? यस्तो छ प्रक्रिया हेर्नुहाेस् - Rastrabani.com
अब कहिले बन्छ प्रदेश सरकार ? यस्तो छ प्रक्रिया हेर्नुहाेस्
काठमाडौं – सातवटै प्रदेशका प्रमुखहरुले पदभार सम्हालेसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि शपथ ग्रहण गरेका छन् । यससँगै अब प्रदेश सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ ।
‘नेपालको संविधान- २०७२’ को धारा १६८ ले प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ।
हेर्नुहोस्, संविधानको धारा १६८ को उपधारा १-
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम गत बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको ३० दिन अर्थात् अबको २६ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्नेछन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले कुल सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।